Luis Suarez Oo Uu Cudurka Korona Fayras Ku Dhacay, - Axadle | Wararka Africa
Luis Suarez Oo Uu Cudurka Korona Fayras Ku Dhacay,
Weeraryahanka reer Uruguay ee Luis Suarez ayaa laga helay cudurka Korona Fayras oo ku dhacay isagoo ku maqan waddankiisa oo uu kala qayb-gelayo kulamada isreeb-reebka Koobka Adduunka ee dalalka Latin America.
Weeraryahanka Atletico Madrid ayaa baadhitaano lagu sameeyey Isniintii waxa lagu ogaaday inuu hayo xanuunkan, laakiin xaaladdiisa guud ee caafimaad ay tahay mid deggan oo aanay ka muuqanin wax astaamo ah, iyadoo aanay jirin wax dhibaato ah oo uu dareemayo.
Arrintan oo dhibaato weyn ku ah xulka qaranka Uruguay iyo Atletico Madrid oo ay kusoo fool leeyihiin ciyaaro adag oo muhiimaddooda leh, ayaa warbixin uu xidhiidhka Uruguay soo saaray uu ku caddeeyey in Luis Suarez uu qabo xanuunkan oo aanu kasii mid ahaan doonin xiddigahooda kulanka adag ee ay Brazil la ciyaari doonaan saqda dhexe ee caawa.
Atletico Madrid ayaan dhinaceeda heli doonin saxeexeedan cusub kulanka ay ku qaabbili doonto Barcelona Sabtida soo socota, taas oo noqon lahayd fursaddii ugu horreysay ee uu ka hor tago naadigii uu waqtiga badan usoo ciyaaray balse sida xun ula dhaqmay ee uu calool-xumada kaga tegay, kaddib markii lagu qasbay inuu albaabka ka baxo.
Uruguay ayaa hore ugu wargelisay Atletico Madrid in dhamaan ciyaartoygeedu ay badqab ka yiihiin COVID-19 kaddib markii laacibka Matias Vina oo xulka ka tirsan laga helay, hase yeeshee xalay fiidkii ayay soo baxday natiijada baadhistii ugu dambaysay oo lagu ogaaday in weeraryahanka Luis Suarez uu isaguna dhibbane u yahay xanuunka.
Laacibka khadka dhexe ee Lucas Torreira ayaa isagu awood u yeelan doona inuu ku laabto Atletico Madrid maadaama laga waayay xanuunkan.
Suarez ayaa dhinaciisa geli doona karantiil uu ku seegi doono kulanka Brazil iyo ciyaaraha adag ee Atletico Madrid ay ku waajihi doonto Barcelona, Lokomotiv Moscow oo ay badhtamaha usbuuca dambe Champions League kaga hor tegi doonaan iyo waliba kulanka kasii dambeeya ee Valencia oo isagana shaki la gelinayo.
Tigray chief urges worldwide mistrust of Ethiopian
Booliiska Baladweyne oo sheegay in ay dad u xireen dil ka